२७ वर्षअघि बनेको ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्दा दुर्घटनाको दुर्दशा ! | Suvadin !
२७ वर्षअघि बनेको ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्दा दुर्घटनाको दुर्दशा !
Aug 14, 2019 12:23
काठमाडौं । सर्लाहीको मलंगवाबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बस शुक्रबार बिहान पृथ्वी राजमार्गबाट त्रिशुलीमा खस्यो । बस त त्रिशूली नदीमा फेला पर्‍यो । तर त्यसमा कति यात्रु थिए र कति बाँचे भन्‍ने यकिन तथ्यांक छैन । उक्त दुर्घटनामा ११ जनाको मृत्यु भएको छ भने १९ जना अझै वेपत्ता छन् । उनीहरुको पाँच जिल्लाका सम्भावित ठाउँहरुमा खोजी भइरहेको छ । मानवीय त्रुटिका कारण उक्त बस दुर्घटना भएको प्रहरीको अनुमान छ ।
जिल्ला ट्राफिक कार्यालय गजुरीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष धादिङ जिल्लाअन्तर्गत पर्ने ८६ किमिको दूरीमा पृथ्वी राजमार्ग खण्डमा १ सय ३८ दुर्घटना भए । जसमा ९३ जनाको मृत्यु भयो भने १ सय २३ जना सख्त र २ सय १० जना सामान्य घाइते भए ।
नयाँ–पुराना तथ्यांक अध्ययन गर्दा पृथ्वी राजमार्गमा मात्रै २०४५ सालयता दुई सय ६९ वटा यात्रुबस त्रिशुलीमा खसेको तथ्यांक प्रहरीसँग छ । धादिङ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक नेत्रप्रसाद भट्टका अनुसार अधिकांश दुर्घटना बिहानको समयमा भएका छन् ।
उनले भने, "अधिकांश दुर्घटनाको कारणमा बिहानीपखको निद्रा, चालकको लापरबाही, तीव्र गति, मादक र लागूपदार्थ सेवन र अर्को सवारीलाई ओभरटेक गर्नु आदि छन् । घुमाउरो बाटो छ त्यहाँ, जोगाएर नकुदाए सोझै त्रिशूलीमा पुगिन्छ, लामो दूरी चलाएर आएका ड्राइभर थाकेर निदाउँदा धेरै दुर्घटना भएका छन्। तीव्र गति र चालकले मादक र लागूपदार्थ सेवन गरेको पनि घटनाको अनुसन्धानमा भेटिएका छन् ।
यसरी त्रिशुलीमामात्र २६९ बस खसेका छन् । देशका अन्य विभिन्‍न जिल्लामा पनि दैनिक दुर्घटना हुने गरेका छन् । त्रिशुलीपछिको सबभन्दा धेरै दुर्घटना हुने कर्णाली राजमार्ग हो । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पनि दिनहुँ दुर्घटना भइरहेका छन् ।
२०४९ मा गरिएको प्रावधान अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन
लामो दूरीका गाडीमा एक जनामात्र चाक हुँदा दुर्घटना बढी हुने गरेको प्रहरीको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तर, लामो दूरीका सवारीमा दुई जना चालक राख्‍नका लागि २७ वर्षअघि ऐन बनाए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १०४ मा लामो दूरीमा चल्ने गाडीमा कम्तीमा दुई जना चालक अनिवार्य राखी हरेक ६-६ घण्टामा पालैपालो चलाउनुपर्ने प्रावधान छ । यसअघि पनि सरकारले दुर्घटना निकै बढ्न थालेपछि लामो दूरीका सवारी साधनमा अनिवार्य दुई जना चालक राख्‍नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेन । फेरि मंगलबार यातायात व्यवस्था विभागले सूचना जारी गर्दै लामो दूरीका सवारीमा दुई जना चालक अनिवार्य राख्‍न निर्देशन जारी गरेको छ।
यसरी जब पर्‍यो राति तब...ताँतीको स्थितीले न त दुर्घटना न्युनीकरण हुन सकेका छन् न त नियमको सही कार्यान्वयन नै भएको छ । प्रस्थानबिन्दुबाट २ सय ५० किलोमिटर या त्योभन्दा बढी दूरीमा चल्ने गाडीले दुई जना चालक नराखे कारबाही गर्ने विभागले चेतावनी दिएको छ ।
तर धेरै गाडी व्यवसायीले यो नियम पालना गरेका छैनन् । एउटै चालकले लामो दूरीमा गाडी चलाउँदा थकानका कारण दुर्घटना हुने गरेको छ । लामो दूरीका तथा राति गाडी चलाउने चालक निदाउने, थकान र अरु मानसिक दबाबले दुर्घटना बढ्न थालेपछि विभागले दुई जना चालक हुनुपर्ने नियम पालना गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
गत वर्षकै ०७५ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले रिफ्रेस सेन्टर निर्माण गर्ने र त्यसका लागि ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवसायीलाई निर्देशन जारी गरेको थियो । तर, लामो दूरीमा चल्ने सवारीसाधन चालकका लागि रिफ्रेस सेन्टरको व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
“सरकारले रिफ्रेस सेन्टर राख्ने भनेको छ । तर हामीले यसको सुविधा लिन पाएका छैनौं । धादिङको गजुरीभन्दा केही तल र बुटवलनजिकै सुनौलमा रिफ्रेस सेन्टर छ । तर यसको सुविधा चालकले लिन पाएका छैनन्,” कर्णली प्रदेशको देउती नागरिक यातायात प्रालिका अध्यक्ष कमल खड्काले भने । यसका साथै नाइट बसका लागि अनुभवी चालक अभाव रहेकाले पनि एउटै चालकले १५ घण्टासम्म बस चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको यातायात व्यवसायीको भनाइ छ ।
“सरकारले हेभी गाडीको लाइसेन्स लिन लाइट गाडी चलाएको दुई वर्षको अनुभव हुनुपर्ने नियम लागू गरेको छ । यो व्यवस्था व्यवहारिक छैन । यसका लागि सरकारले हेभी र लाइट चालकलाई छुट्टाछुट्टै कर लिएर हेभी गाडीको ट्रायल दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,” खड्काले भने, “सरकारले यातायात क्षेत्रको कानुन, नियम बनाउँदा व्यवसायीलाई पनि सँगै राखेर छलफल गर्नुपर्छ तर सरकारले बनाउने यस्ता नीति, नियममा हाम्रो कुरा सुनिँदैन । सरकारले एकलौटी ढङ्गबाट नियम बनाउँदा हेभी गाडीको चालक कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने नीतिगत रुपमै अस्पष्ट छ ।”
चेकजाँच गर्न म्यानपावर अभावः ट्राफिक प्रहरी
दुई चालकको व्यवस्थाका साथै लामो दूरीका सवारीमा टाइमकार्ड लागू गर्दा दुर्घटना कम हुने प्रहरी उपरीक्षक पौडेल बताउँछन् । “तर लामो रुटमा चल्ने सवारीसाधनमा दुईजना चालक राखे–नराखेको टाइमकार्ड फलो गरे–नगरेको चेकजाँच गर्न लामो दूरीको सडकको बीचबीचमा राख्नुपर्ने पर्याप्त जनशक्ति अभाव रहेको छ,” उपरीक्षक पौडेलले भने, “टाइमकार्ड लागू गरिएका सडकमा पनि चालकले कसरी हुन्छ, टाइमकार्ड नियम उल्लङ्घन गर्ने गर्छन् । सडकमा तोकेभन्दा बढी रफ्तारमा गाडी हाँक्ने र ट्राफिक प्रहरीको पोष्ट छेउमा लगेर गाडी रोकेर यात्रुलाई पिसाब फेराउने, चिया, खाजा खुवाउने गर्छन् । चालकले टाइमकार्ड लागू भएका सडकमा पनि यसरी ट्राफिक प्रहरीलाई झुक्याउने गर्छन् ।”
दुई चालकको व्यवस्थासँगै लामो दूरीका सडकको प्रत्येक ३०-३० किमि स्थानमा ट्राफिक प्रहरीको चेकजाँच राख्न सके टाइमकार्ड लागू हुने र कम स्पिडमा सवारी चलाउँदा दुर्घटना न्यूनीकरण हुने प्रहरी उपरीक्षक पौडेलले बताए ।
“म इटहरीमा कार्यरत हुँदा झापा, मोरङ र सुनसरीमा टिपरलाई टाइमकार्ड लागू गराएको थिएँ । त्यो क्षेत्रमा प्रहरी बिटहरु पर्याप्त भएकाले हालसम्म त्यहाँ टाइमकार्ड लागू भएको छ । तर पूर्व पश्चिम राजमार्गभर टाइमकार्ड लागू गराउन जनशक्ति अभावका कारण सम्भव देखिँदैन । विशेष सफ्टवेयर बनाएर चालक फेरे–नफेरेको र टाइम फलो गरे–नगरेको सवारी ट्र्याकिङ गर्न सके असम्भव भन्ने हुँदैन,” पौडेलले भने ।
हाल निश्चित पर्यटकीय, निकुञ्ज, विद्यालय र अस्पताल क्षेत्रमा मात्र सवारीको प्रतिघण्टा गति तोकिएको छ । सडकको स्तर उन्‍नतीमा पनि ध्यान दिनुपर्ने ट्राफिक प्रहरीको सुझाव छ । लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधन एउटै चालकले हाँक्दा निद्राका कारण सवारी दुर्घटनामा पर्ने गरेको ट्राफिक प्रहरीको निष्कर्ष छ ।
चालक पाएका छैनौं : महासंघ
सरकारले लागू गरेको लामो रुटमा चल्ने सवारी साधनमा अनिवार्य दुई चालक राख्नुपर्ने नियम स्वागतयोग्य भएको यातायात व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
“लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनमा अनिवार्य दुई चालक राख्नुपर्ने नियम धेरै पहिलेदेखि नै थियो । यो निक्कै राम्रो कुरा हो । यात्रुवाहक सवारीमा दुई चालक अझै महत्वपूर्ण हुन्छन्,” नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने, “नाइट बस चलाउने चालक पाउन एकदमै गाह्रो छ । हेभी गाडीको ट्रायल लामो समय नखुल्ने र लाइट गाडीको अनुभव अनिवार्य भएको व्यवस्थाका कारण हेभी गाडी चालक उत्पादनमा कमी आएको छ । यसैले चालक पाउन सकेका छैनौं । दुई चालक राख्दा चालकलाई दिने तलब बच्छ भनेर चालक नराखेका होइनौं । हामी पनि लामो रुटमा रुटमा दुई चालक राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं ।”
यसरी यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवासयीसँगबीचको सहकार्य हुन नसक्दा पनि नियम बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।